Efa seriny amin’ny fitsenana an’i Dada ny vahoaka ! – MyDago.com aime Madagascar
Efa seriny amin’ny fanomanana ny fitsenana ny Filoha Ravalomanana Marc, ny Ankolafy Ravalomanana.Somebiseby avokoa ireo nomena andraikitra amin’ny fandaminana ny fitsenana. Ny vahoaka ihany koa dia tonga maro teny an-kianja androany.
Nipoitra avokoa ireo olona, izay tsy tazana teny amin’ity kianja Magro ity hatrizay nanatevin-daharana ireo mpitolona. Ireo lahateny maro samihafa teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka androany, dia niompana amin’ny fanentanana ny vahoaka malagasy rehetra ho tonga maro amin’ny Sabotsy izao eny Ivato.
Ramatoa Brenda Mpikambana ao amin’ny CT avy any Ambatondrazaka, dia nanambara fa hiala any Ambatondrazaka rahampitso Zoma maraina, ny solontenan’ny vahoaka any an-toerana, ho eny Ivato. Sady voky vary, no voky be sisika izahay avy any hoy izy, ka vonona tanteraka. Nanafatra ny vahoaka eto Antananarivo ny tenany, mba handray ireo olona avy any amin’ny faritra. Ankoatra izay, dia nambaran’ity olomboatendry ity, fa izahay 92 mianadahy dia tsy maintsy tafiditra eny Ivato ary vonona hiaro ny Filoha Ravalomanana.
Ramatoa Fanja filoha mpitarika ny Tanora Tim,
dia nisaotra an’Andriamanitra Lehibe ny amin’ny nahatafavory antsika marobe toy izao. Ho avy ny Filoha Ravalomanana hoy izy, amin’ny Sabotsy amin’ny 2ora tolankadro.Misy ny sasany milaza amin’ny radio sy ny elakelantrano, fa tsy ho avy ny tenany. Lainga izany, fa tsy maintsy tonga izy,ary tsy honohono intsony fa tena ho avy. Namafisiny ihany koa fa vonona ny hametraka azy amin’ny fifidianana filohampirenena ny tanora Tim, ary manantena izy ireo fa tsy misy afa tsy ny Filoha Ravalomanana ihany no afaka hampandroso ny firenena.
Ramatoa CT Sandra dia nilaza fa tena faly ny tenany fa ho avy i Dada. Tsy iadiankevitra intsony hoy izy,ny fahatongavany. Mbola manana adidy isika, hoy ity mpikambana ao amin’ny Kongresin’ny tetezamita ity, amin’ny fanokafana ny radio nankatona.Efa manana strategie isika, ka aoka tsy hampitahorin’ny olona izany.
Ramatoa CT Charline avy Boeny, dia naneho ny hafaliana ihany koa amin’ny fahatongavan’i Dada sy ny fahamaroan’ny olona tonga marobe teny an-kianja. Kely sisa dia tonga ilay nandrasantsika, hoy izy hiofahofa ny avy any Boeny. Asehontsika an’izao tontolo izao, fa ny vahoaka miaraka amin’ny Filoha Ravalomanana hoy ity mpikambana ao amin’ny CT ity dia tia fahendrena sy fihavanana, avelao any ireo hanao izay ataony. Nitodika tamin’ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny tenany. Natao hitandro ny filaminana sy hiaro ny vahoaka ianareo hoy ny mpandahateny. Izahay ireto dia anabavinareo sy rahalahinareo, koa manantena izahay fa hiaro anay ianareo amin’io Sabotsy io. Tsy nanao taombaovao ny vahoaka tany Boeny hoy Charline fa amin’io ny taombaovaonay.
Andriamatoa Jeanson dia nilaza fa ny 21 janoary dia andro manantantara ary hamadihana ny pejy. Raha niala teto ny Filoha Ravalomanana hoy izy, dia tsy nila ady, azony atao tsara ny hisian’ny ady fa nandefitra noho ny tombotsoan’ny vahoaka malagasy izy. Noho izany dia niala ary nilamina isika. Namela mamy izy rehefa nandeha ary isika vahoaka kosa dia niaritra ny hainandro, ny hatsiaka, ny lacrymogéne teto. Nitsatoka tao antsaintsika hoy ity mpanao politika ity, ny fitiavan-tanindrazana ary manantena fa iriaria miaraka aminy. Izy no nametrahantsika fitokisana hoy izy amin’ny famahana ny olana, izay efa, tao anatin’ny lavaka mangitsongitsoka. Izay toetsaina izay, hoy Jeanson no entintsika manomana, mandamina ny fitsenana azy. Ny fahatongavany, eto hoy ity mpikambana ao amin’ny Mfm ity, no zavadehibe amin’ny fampiharana ny feuille de route. Hitafatafa amin’ny malagasy rehetra, handamina ny fitantanana ny firenena ary hametraka paikady amin’ny lalana izorana.Ezaka lehibe izany, hoy Jeanson ary hainga lehibe. Aoka isika tsy entanim-po fotsiny ihany fa samy totorebika anao fety, fa tonga ny Filoha amin’ny fanatsarana ny zavatra tokony atao eto.
23 réflexions sur « Efa seriny amin’ny fitsenana an’i Dada ny vahoaka ! »
Aza kivy na ketraka fatsy maintsy ho avy ilay maraina .
Dia misaotra anareo Andriambavilanitra fa resy indray ny lehilahy.
Aiza ny lehilahy e!!ho ahilika aminay vehivavy irery ve ity raharaha ity e!(hisy hitsovalana eo izao an!)
Mbola ao ve Bemafohy a!aiza e! jereo ny sipa mitapolaka fa aiza ianareo lehilahy e! izany ny sipa
rehefa mihetsika, sady manjakely !
Efa ela no niandrasana ity vaninandro 21 ity. Ny mampalahelo fotsiny dia efa tsy ampy ireo fiara taxi brousse avy any Tuléar ho aty Tanà fa tsy misy mpandeha hono nefa betsaka ireo olona niakatra aty Tanà avy any U nanomboka ny talata lasa teo ka réservation sisa no azo atao. Izaho Terminator efa tonga omaly Alakamisy niaraka t@ ireo mpikatroka RA8 marobe avy any Tuléar. Koa nareo Tanà sisa no andrasana hanafana ny fitsenana fa zahay ho hitanareo ho marobe rahampitso: banderolle « Toliary tsy miroro fa miandry an’i Dada » no entinay. Koa tongava maro eh! Mbola hisy namana maro be ho avy rahampitso Sabotsy maraina, koa samia mihetsika … Bon courrrraaaaaggggee daholo!
Mahafaly ny mamaky fivononany rehetra hitsena ny filohantsika M.Ravalomanana.
Aza adinontsika fa Ravalomanana Marc no tokana, antsika, sarotra soloina ka MILA FIAROVANA AVO DIA AVO RE TOMPOKO O!
Ny « légionnaires, en civil »,frantsay, na afa koa efa vaovidiny frantsay,ary ireo gasy voahonjona hamadika ny fireneny, dia efa manerana ny tanàna indrindra eny Ivato.Drafitra efa voalamindry zareo ela izany satria tetikady fampiasany frantsay erany kolonia voagejany.
Isika no sady tsy zatra tetika politika sy miaramila ka mila mifanampy e!
Toy ny famenohana ny fiangonana dia azafady re mba fenoy mpikarokaroka sy fitsikolovana koa ny toerana rehetra hivezivezeny ireo frantsay e!
Ampiasao daholo ny portable na ho any sary na ho any feo sendra re!
INDRINDRA re azafady HAJONINA ANTSAINA ITY tompoko ô:
Eo foana ireo gasy « congénitalement vendus » ka vonona hatrany hanampy ny frantsay mba handringana ny filohantsika, dia ho mora ho any « communauté internationale » ny hanaiky ny resabe hoe « réglements de comptes à la malgacho-malgache », sady hiarhandry zareo matanjaka anie ny hevidratsy e!
Avy eo, dia maika sy hihambo sarko ho mpandamina ny resaka sy hampandry ny tany satria efa an-toerana ny miaramilany.
Efa an-taonany no nampidirako io fijery io fa izoa vao maika tena miasa ka MAILO daholo re isika ô!
Etre vigilant, ça ira
Venir aussi , ça va
Demain il va falloir faire face à la Police et la Gendarmerie !
C’est ce qu’ a déclaré Razanakisoa : Elle a egalement déclaré qu’avant de manifester, les gens devraient BIEN reflechir pour ne pas se SE FAIRE TUER BETEMENT !
Quelle p…… !
ô DOY E
DIA HIANDRY VASOKA IN1 NY ZANAK I DADA RAHAMPITSO, NA TONGA EO KOA INY DE TSY HISY RAZANA HALEVINA FA HO DORANAY RAH AVAO AZONAY
AZA ADINO RY VAHOAKA NAMPIJALIANDRAV8 NY MITONDRA ZAVAMANENO FA TS FANTATRA IZAY MISEHO
IVATO @ 9h
C’est ce qu’a déclaré RAZANAKISOA et ses cochonnais hihihihihihi !
Aza dondrona ry vahoaka malagasy fa tsy sahy manao izany izy e ! I Mada no tsisy lalàna @ izao fotoana izao fa kosa misy ny Tribunal Internationnal e ! Don-tandroka fotsiny ny an’ireo fa efa mang….y ampatalou !!! On ne sait jamais si ça peut marcher, le tout pour le tout hihihihihi !
Dia mahafaly fa miomana ny vahoaka hitsena ny filoha. Tena poire mihintsy ilay razanankisoa ry Josefa. Atao ahoana fa rehefa maivan-doha dia ohatran’ireny.
Tsy mahagaga amin’i zanakisoa mpams!!,mitady hirika indray hanaovana sorona
fa asa firy indray no tadiavin’ny DEVOLINY?????iny tokony ho taritina @ volony
eraky ny arabe fa devoly miseho andro,mpams tratra atoandro mihintsy.
Mbola ho avy ny anao Rakrisy a!Haparo ihany ny hadalana miaro kasoa ry mpiandry kisoa a!
Raharaha ‘ty reiolona ô !
Efa kenda i Rabe zanakisoa !!!Ny varavaran’ny WC-ny tsy voahidiny intsony fa midanaka beuuuuuuu ! Mamofona eran’ny tranony MDR !
Aza manody ny VOATERY manaraka ny avendranan’ny vadiny !
Ity ny satroka nangalarina mba hisehoana hoe mpanjaka, fa mpanjakan’ ny vendrana an ! :
20 janvier 2012 à 15 h 40 min
Inona no tianao ho soratana ry Josefa â ? Pétasse, Plouc, sa Pute na Pourriture ? Sa dia samy miheritreritra an’izay tiany ?
Rehefa tsy mahay manaja tena sy tsy manaja ny vahoaka malagasy ilay kisoavavy, inona moa no dia hakanao gant toy izao ê !
Iny sy ilay tay-taim-baombina be panda, no tena FAHAVALOM-BAHOAKA AO KOA !!!
AZY NY ALLER FA AN’NY VAHOAKA NY RETOUR TSY HO ELA !
MIPETRAKA FOANA NY FANONTANIANA : INONA MARINA MOA NY TENA ATAON’ITY HOE BERIZIKY ITY, AO ANATIN’IO GOVERNEMANTA IO ???
PRAIMINISTRA SA MPAMAFA BIRAO, SA « SEKRETERA » PARTIKILERAN’I DOMELINA ? SA DIA MANAO AMPAOSY NY VOLAM-BAHOAKA FOTSINY ? Mody atao hoe karama, fa tsy hita izay asa tena ataony !
Mitaintaina ianareo noho ny zava-misy ? Malahelo ianareo mahita ny ataon’ireto tsy valahara ireto amin’ny vahoaka malagasy ? Tezitra ianareo noho ny ataon’ny sasany any amin’ny tanindrazan-tsika ?
Miandry ny hetahetam-ponareo an-tsoratra, sary sns ireto olona ireto, ka ireto ny mailaka :
louis.michel@europarl.europa.eu ary koa jeremy.lester@eeas.europa.eu
Lazao amin-dry zareo daholo ny marina FANTATRA SY HITANAREO !
20 janvier 2012 à 15 h 52 min
Miandry ny doléances, fangatahana, filazana ny halahelo rehetra atramin’izay ity olona ity :
Dia ity koa :
Sary, documents, izay zavatra hitanareo sy fantatrareo fa marina, miaraka amin’ny porofo rehetra ! Izay fomba fandroatanareo mety daholo, tsy voatery hoe langazy diplaomatika !
LA NON DENONCIATION DE CRIME EST UN CRIME EN ELLE-MÊME, ET NE PEUT QU’AVILIR CELUI OU CELLE QUI EN EST TEMOIN !! LE SORT DES 20 MILLIONS DE MALGACHES EST ENTRE VOS MAINS !!!
MILA MITSANGANA DAHOLO NY OLO-MARINA SY TIA TANINDRAZANA REHETRA !
Misy tena tara mihitsy any ho any, fa hita matetika mihitsy i Charline marina an !
Tsy misy tsiny e ! Kô hita fa manja kooo
O ry KM a ! Mba aoka aloha hijanona ilay famelezana an’i Beriziky sy Zafy e !
Sao mba mety ihany ny ataony, ary mbola mety ho namana mihitsy aza !
Tsy mora ny manao zavatra tsinona ! Izaho aloha dia manao hoe : ny bainga mivadika no ho porofo, na misy zavatra maro miseho aza !
20 janvier 2012 à 16 h 33 min
Poire no tian’i Josefa ho lazaina ka!
I Beriziky dia mpanao photocopies aloha no asany hatramin’izao.
I Eva Joly koa izay députée européen dia miandry ny sary sy porofo rehetra hanaratsian’ny Lekely indrindra amin’izao fotoana izao.
I RICHARD TAITAIMBAOBINA BE PANDA
DIA MIGESTA ERY NEFA NANDRA
AVOAKA DAHOLO ITY VAVA
FEO MAHERY, TETIKADY NEFA RAVA
HO AVY TOKOA MANTSY RAVALOMANANA
DIA APOITRA DAHOLO NY SISA HANANANA
TANDREMO NEFA RANAMANA
FA NY VAHOAKA TSY AZONAO SAKANANA
HO TONGA TOKOA NY ANDRO IRAIKY AMBY ROAPOLO JANOARY
VONONA DAHOLO NY ZANAK’I DADA, NA LEHIBE, NA KELY TAHINJANAHARY
KA NY TENIKO AMININTSIKA REHETRA
IRAY FOLO MANANA, ROA MAKA BAHANA TELO TSY MISY FEPETRA
ELA TOKOA MANTSY IZAY TELO TAONA NIJALIANA IZAY
KA ASA RAHA FANTATRY I
O Rasamy a !
Raha izaho i Risara Be Panda,
manao DEMISSION aho, fa ho atambatry ny olona amin’i Domelina ao !
KA ASA RAHA FANTATRY I TGV MIANAKAVY NY FIAINAN’NY VAHOAKA MIKILAY
RY ZALAHY ATSY ANDANINY MIREVY FOANA, MANASA VAHINY
NEFA TSY HITANY AKORY NY TSY AMPY SAKAFO TSY MANANTSINY
MAHALASA FISAINANA IHANY NY TOETRANAREO
MIEBOEBO, MANAMBONY TENA NEFA ZERO
EFA HAMARANA IHANY IZAHO RY TGV
TSY ALEO AMINIZAY VE MITSAOKA DIENY ZAO? ALLEZ!
Josefa! hita oah!i Beriziky aloha izay hanaovany azy any @’izay fa i dadabe Zafy
no mankararirary ahy raha voatohintohina,ny hitiavako azy manokana dia izy tsy olon’
i la frantsa sady nahavita izy e! tena nanao izy ary nitolona fa mba jereo anie e! aiza izao i Deba????
voky izy dia natory noana izy dia nadeha CORSAIRE.Fa i dadabe Zafy mbola miady na dia efa saika hanambaka
ny ainy foana aza @’ny taonany @’io efa zokinjokiny ihany an!!!
Précédent Article précédent : Ho tonga hitondra FILAMINANA, hiverenan’ny fankatoavana, sy fampandrosoana
Suivant Article suivant : Fanentanana ho fitsenana ny filoha Ravalomanana